FAHARATSIAN’NY LALAM-PIRENENA FAHAROA : Antony iray mampidangana ny vidin’ entana
Misy fiantraikany amin’ny vidin’entana eto an-drenivohitra ny faharatsian’ny lalam-pirenena faharoa amin’izao fotoana. 29 juillet 2021
Nambaran’ireo mpitatitra, mpandraharaha, mpiala sasatra mampiasa ity lalana ity mantsy fa mitombo ny solika lany rehefa ratsy ny lalana. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary misy andian-jiolahy mangalatra sy mandroba ny entana any anaty kaontenera sy kamiao izay tsy afaka na sendra mihitsoka amin’ireny lalan-dratsy feno lavadavaka ireny.
Nanomboka ny volana jona teo no nampiaka-peo hijerena ity lalam-pirenena faharoa ity ny mpampiasa lalana. Ny fiandohan’ny volana jolay teo no mafy indrindra ny hetsika fitakiana satria niafara tamin’ny fitokonan’ny mpitatitra mihitsy izany. Amin’ny ankapobeny, saika ahitana lavadavaka avokoa ny RN2 vao tafavoaka etsy Ambohimangakely raha miainga avy aty Antananarivo. Miharatsy indray izany miditra an’i Mandraka ary mitombo hatrany ny fahapotehany rehefa manohy ny dia miatsinanana.
Eo Antsapanana ka hatrany Toamasina kosa no tena mampiteny ny moana, ny fahasimban-dalana. Ora telo raha kely indrindra no tsy maintsy lanian’ny fiara tsy mataho-dalana amin’ny lalana 58km monja. Mahatratra ora dimy mahery kosa ny fiara fitateram-bahoaka ary mbola ambonin’io indray ny ora lanin’ireo fiara lehibe mpitatitra entana avy any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Raha ora fito latsaka no nanaovana an’Antananarivo sy Toamasina teo aloha dia efa maherin’ny ora folo no tsy maintsy laniana eny an-dalana amin’izao fotoana, raha ny nambaran’ireo mpitatitra nanaovana fanadihadiana tetsy Andohatapenaka.
Efa nampahafantatra tamin’ny tompon’andraikitra ny faharatsian’ity fotodrafitrasa ity ny Loholon’i Madagasikara, Manasoa Donat Tong saingy nilaza ny Minisitry ny Asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo, raha nanontanian’ny mpanao gazety ny fiandohan’ny jolay lasa teo fa tsy ampy ny vola eo am-pelatanan’ny Minisiteran’ny Asa vaventy natokana hikojakojana ny lalam-pirenena faharoa. Ny nahagaga anefa dia roa andro monja taorian’io nanambarany fa tsy ampy ny tetibola io dia efa tonga tany Brickaville ireo fiara vaventy sy fitaovana fanamboaran-dalana hanamboarana ny ampahany amin’ny lalana simba. Nangatahan’ny Loholona Manasoa Donat Tong koa ny tokony hijeren’ny Fanjakana ny lalana mampitohy an’i Vatomandry sy Mahanoro satria efa ratsy dia ratsy izy amin’izao fotoana izao ary mampikaikaika ny vahoaka any an-toerana.
Mampitombo ny kolikoly
Miteraka kolikoly avo lenta koa anefa ny fahasimban’ity lalam-pirenena ity. Araka ny nambaran’ny Minisitry ny Asa vaventy, Hajo Andrianainarivelo hatrany, nisy tamin’ireo mpandraharaha sy mpitatitra nihaona taminy taorian’ny fihetsiketsehana nataon’ny mpampiasa lalana no nangataka homena alalana sy tsy hosaziana rehefa mitondra entana ambonin’ny tokony ho izy. "Misy amin’ireo mpitatitra no mihevitra fa simba ny lalam-pirenena faharoa ka tokony homena alalana izy ireo hitondra entana izay zakany na avo roa heny mihoatra ny tokony ho izy aza. Tsy fanarahan-dalàna miteraka kolikoly izany ka tsy azo ekena. Miezaka manarina izay simba ny Fanjakana saingy tsy maintsy atao manara-penitra izany hisorohana ny kitoatoa sy ny fandaniam-bola be fahatany", hoy ny fanazavan’ny Minisitra Hajo Andrianainarivelo, nandritra ny fihaonany tamin’ireo solontenan’ny mpampiasa ny RN2 nitokona niakatra teto Antananarivo.
Tsy mifanaraka amin’ny fotodrafitrasa ny fiarabe
Antony hafa mahapotika vetivety ity lalam-pirenena faharoa ity koa ny fisian’ireo fiara vaventy na “Poids Lourds” izay tsy mifanaraka amin’ny lalana. Taty aoriana mantsy vao nampidirina teto amintsika ireny fitaovana ireny. Mbola tany amin’ny "trafic 911" sy "1513" avokoa anefa no nanaovana tara ny lalam-pirenena faharoa. Efa nitombo avo folo heny ny fitomboan’ny fivezivezena na "trafic" ka mahatonga ny fotodrafitrasa toy ny lalana mizaka ny tsy eran’ny ainy. Manampy trotraka izay koa ny tsy fanajan’ny mpitatitra ny fenitry ny lanja takiana. Tsy voatery ho hita soritra mivantana eo no ho eo ny fiantraikan’ny tsy fanajana ny lanja apetraka saingy mamotika tsikelikely ny lalam-pirenena. Toerana maro amin’iny lalam-pirenena faharoa iny, ohatra, no ahitana lalana vita tara mivoitra sy mibontsina ho azy noho izay havesarana tafahoatra izay. Toerana maro koa no aharaisana fitarainana fa voasakan’ny dahalo sy voaroba indrindra amin’ireo kizo sy lalana tena ratsy.
Nanantitra moa ny Minisitra Hajo Andrianainarivelo fa tokony hisy ny tamberin’andraikitra avy amin’ireo fiara mpitatitra lehibe mpampiasa lalana hikojakojana ireny lalam-pirenena ireny. Heverina ho tataovana lamandy ny fiara lehibe rehetra “Poids Lourds” ivelan’ny “trafic 911” sy ny “1513” hahafahana manana tahiry hanampiana ny vola natokana hikojakojana ny lalana na ny FER. Mitsipaka tanteraka izay anefa ireo vondron’ny mpitatitra mampiasa ireny “Poids lourds” ireny. Nanipika mazava ireto farany fa anjaran’ny Fanjakana sy ny Minisiteran’ny Asa vaventy ny mametraka fotodrafitrasa manara-penitra mifanaraka amin’ny fandrosoana ankehitriny. “Efa tokony hisy fotodrafitrasa vaovao hitsangana mifanaraka amin’ny halehiben’ny fiara sy ny vesatry ny entana eto amintsika. Manaiky izahay fa mety tsy mifanaraka amin’ny fiara ny lalana ampiasaina saingy angamba tsy fahadisoanay izany. Efa mivoatra avokoa ny zava-drehetra amin’izao ary tafiditra ao anatin’ny fandrosoana ny fampiasana ny fiara lehibe sy vaventy. Efa tokony heverin’ny Fanjakana ny hanamboarana lalana migodana, manara-penitra miainga avy aty Toamasina mihazo ny renivohi-paritany hafa”, hoy ny fivondronan’ny mpitatitra mampiasa ireny fiara lehibe ireny. Marihina fa efa ho am-polo taonany tokoa no noeritreretina sy napetraka teto Madagasikara ny tetikasa fanamboarana lalana migodana miainga avy any amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, mandalo an’Ambatondrazaka ary miafara eto Antananarivo saingy tsy mbola tafapetraka izany hatramin’izao. Efa nisy fifanarahanna natao anefa tamin’ny mpamatsy vola ary efa nofaritana ny toerana sy ny tombantomban’ny fandaniana.
Tsy ahitan-teny ny olom-boafidy
Lalandran’ny fampandrosoana, iankinan’ny toekarem-pirenena ity lalam-pirenena resahina eto ity. Avy ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina avokoa no miainga ny entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro hafarana avy any ivelany. Raha ratsy izany ny lalana dia mazava ho azy fa hiantraika mivantana amin’ny vidin’entana ny fiakaram-bidy izay tsy maintsy esorin’ny mpandraharaha amin’ny masonkarenany. Ny mahagaga anefa dia toa tsy mba ahitan-teny firy ireo olom-boafidy avy amin’ny Faritra Atsinanana rehefa anontaniana mahakasika ny fanamboarana azy io.
Solombavambahoaka ao amin’ny Faritra Atsinanana, ohatra, no nanontanianay sy nangatahana hilaza ny heviny amin’ny fanamboaran-dalana tahaka izao saingy tsy nanaiky nanao tatitra. Anjara asan’ny solombavambahoaka indrindra anefa ny mampita ny hetahetam-bahoaka any amin’ny fahefana mpanatanteraka. Ny Governoran’ny Faritra Atsinanana kosa no nilaza mazava fa efa nalefa any amin’ireo toerana hita fa tena ratsy ireo fiara sy fitaovana fanamboaran-dalana amin’izao fotoana saingy tsy avy hatrany dia niasa fa mbola nametraka ny toerana hifaharany aloha. Tsy mbola ho ato ho ato, araka izany no hivaha tanteraka ny olan’ny mpitaitra mampiasa ity lalam-pirenena faharoa ity.